Fitsidihana ny bilaogy manerantany Talata · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2018 12:27 GMT
Mahmood of Mahmood's Den manambara fa tsy ny handray ny torolàlana avy amin'ny Reporters sans frontières ho an'ny aterineto maimaim-poana ihany no ataony fa ny handika izany ho amin'ny teny arabo, ary handefa azy ireo any amin'ny mpikambana ao amin'ny parlemanta. Fa maninona no tsy mailaka? Eny, toa tsy mahomby ny fandefasana mailaka ho an'ireo depiote Bahrainita.
Another Irani Online mandinika ny valim-pifidianana Iraniana ary manontany hoe: “ahoana moa no tena ahafantarantsika ny tenantsika?“
Pedram Moallemian, izay manoratra ny The Eyeranian, manazava ny antony tsy nifidianany tamin'ny herinandro lasa.
Sabbah Blog manana tantara momba ny fiverenan'ireo ankizy mpitaingin-drameva mifanala hazakazaka amin'ny fianakaviany.
Saudi Jeans nanomboka nandray fepetra hanangana fiarahamonina bilaogy Saodiana.
Ny bilaogy Al-Hiwar, nosoratan'ny Amerikana iray any Afovoany Atsinanana mianatra momba ny politika any Libanona sy Yemen, mandinika ny fomba hanasokajian'ireo fikambanana vaovao samihafa momba an'i George Hawi novonoina vao haingana.
Nanomboka nanakatona ny bilaogy Typepad indray ve i Shina? Nahatsikaritra fanakorontanana lehibe mba hahazoana ny tolotra bilaogy mpampiantrano i Asiapundit na dia nanamarika aza i Fons of China Herald fa tsy ny tranonkla Typepad rehetra no voakasika.
Ratsy ve ny sivana rehetra? EastSouthNorthWest milaza fa angamba tokony hisy fetrany ny fahalalahana haneho hevitra .
Mampahatsiahy antsika i Barrio Flores fa raha misy antony maromaro tsy hiombonana hevitra amin'i Evo Morales, tsy tokony hionona amin'ny fanavakavahana ireo mpanohitra .
Central Budapest manamarika tsingerintaona roa lehibe: Voalohany, mankalaza ny tsingerintaona faha-15 n'ny fifanakalozana an-tsenam-bola Budapest taorian'ny fisokafany indray tamin'ny taona 1990. Amin'ny fanamarihana somary matroka kokoa, kasaina hosokafana amin'ny tsingerintaona faha-50 taonan'ny zava-nitranga ny tsangambatao fahatsiarovana ny fitroarana 1956. Raha ny marina, dia hapetraka amin'ny toerana nisy ny sarivongan'i Stalin ny tsangambato.
Loic Le Meur manondro lahatsoratra lava momba ny fanoratana isan'andro ataon'olon-tsotra sy ny bilaogy ao amin'ny gazety Liberation. Ahitana sary lehibe eo amin'ny pejy voalohany ny taratasy; namoaka azy tao amin'ny lahatsorany i Loic.
Gaurav Sabnis ao amin'ny Vantage Point mankalaza ny vaovao fa fanjakana Indiana sasany no manomboka miala amin'ny rafitra ampihimamba amin'ny fivarotana vokatra izay tohanan'ny governemanta.
This is Zimbabwe mandefa sary habakabaka mampihetsi-po mampiseho ny fiantraikan'ilay antsoina hoe “Hetsika Fanadiovana”.
The Zimbabwean Pundit indray nahita fa toa manonta vola mba hiadiana amin'ny fiakaram-bidim-piainana ny governemanta. Indrisy, araka ny filazan'ireo mpianatra ao amin'ny Repoblikan'i Weimar sy Ady Sivily Shinoa, mitarika any amin'ny fiakaram-bidin-javatra tafahoatra ny fanontana vola.
Tianay ny miala tsiny amin'ny mpanoratra ny Black Looks; fahadisoana fanitsiana natao tamin'ny famoahana ny fitsidihana bilaogy omaly izay lasa niova ny maha-lahy na vavy azy. Miala tsiny amin'ny fahadisoana izahay.
Atoa.Brown tsy mety resy miresaka momba ny lohahevitra manifestos bilaogera.
Tomorrow mandrakitra ny loza madinika izay nitranga raha nanafangaro tanora bilaogera Singapaoreana roa ny gazety.